“Dhuufuu Harreef Funyaan Hin Qabatan” – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo“Dhuufuu Harreef Funyaan Hin Qabatan”
“Dhuufuu Harreef Funyaan Hin Qabatan”
Waaqoo Nooleetin, Gurraandhala 14, 2018
Ilmeen/Ilmoon Guddisaa dhaleerra qabeef dheebotti; kan dhalatteef irra kan guddiseef garaa laatti. Bixxilloonni diinaan bixxilaman Dh.D.U.On /OPDOn danqaraa QBO harka mirgaa Wayyaanee ti.
Dh.D.U.On Dhaabbata Dimokiraasummaa Ummata Oromoo osoo hin taane, dhaabbata duguuggaa Ummata Oromooti. Dhaabni jaleen Wayyaanee OPDOn ergama diinaa fudhachuun akka waan qabsoo Oromoo cinaa hiriirtee fakkachuun ummata irraa dhalatan keessatti diinaaf utubaa ta’uun, diina jiraachisaa ofis bara baafachuuf jecha tooftaa fi Tarsiimoo ololaa ummata Oromoorratti tolfachuun, qabsoo Oromoo boba’aa jirutti Bishaan naqaa jirti.
“Dabus Ejersumatuu Dongora” Qabsoon haqaa kan abbaa Qabsoo irra jiruuti. Qabsoon ummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru, Qabsoon Kallachi QBO ABOn gaggeessaa turee fi jiru akkasumass Qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo hoganummaa ABO tiin gaggeessaa jiru qabsoo haqaa, qabsoo goonni kumii kitiliin itti waregamee as geette Qabsoo Bilisummaa, Qabsoo Walabummaa, Qabsoo Mirga abbaa Biyyummaa fi Qabsoo Birmadummaaf taasifamuu dha malee Qabsoo “Hofoffeen Ulee Qobboo” alaa fi keessaan wal gurmeessuun akka cidha guyyaa tokkootti hamoommota walii bahuun biraa galtuu miti.
“Siif hooqaa naa hooqiin” diinaa fi lukkeeleen diinaa EPRDF/TPLF/OPDOn maqaa gamaagama jedhuun yeroo gara garaatti xibaaran gaaffii ummattoota Biyyattii addatti ammoo gaaffii ummata Oromoo hin deebisu, deebisees hin beeku. Gaaffiin Oromoo gaaffii bu’uraa gaaffii Bilisummaa, gaaffii Walabummaa, gaaffii Birmadummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati malee gaaffiii Haaromsaa/Wayyoominaa (Reform) miti. Tooftaan Wayyaaneen QBO tti gufuu ta’uun harqoota gabrummaa ummata Oromotti fe’uun bara biittaa ishii dheereffattu keessaa inni duraa, Suphee Adeetitti oomishte keessaa yoo Okoteen marqaa tokko cabde tan biroo Ibidarra kaayuudha.
Jijjiiramni Bu’uuraa/Hundee Wayyaanneen lallabdu Haarawoomsa, haarawoomsa, haarawoomsa… jedhaatii, Haarawoomsi Waayyaaneefis ta’ee Lukkeelee isheef Aadaa baratame kan aangoo irratti wal tursuuti. Ummattoota biyyattii keessatti guyyaadhaan rakkoo uumaatii ofi isaaniitii of haaromsuun gita bittaaf of qopheessuu duwwadha. Haarawoomsi diinaa fi lukkeeleen diinaa dhiitee bariitee karaa Qorqoorroo/Taanikaa Hidhaa laga Abbaayyaa fi Boqqollootiin lallabaa ooltu rakkoo ummattota biyyattiif furmaata arganii osoo hin taane, Qalbii fi gurra ummataa hatuun bitta isaanii dheerafachuu dha.
Wayyaanee fi jaleen ishee OPDOn yeroo gara garaatti rakkinnoota ta’e jedhanii uumaa jiraniin quba wal qabeenyaan Wayyaanee Abbaa rakkina uumuu fi OPDO ammoo abbaa rakkina Oromoo furu fakkeessuun ummata Oromoo sobaa fi sosobaan qabsoo isaa irraa of duuba deebisuuf dhama’aa jiru. Akka kanaanis Biyyattii keessatti rakkinoota jiran keessaa rakkoo hawaasummaa, rakkoo diinagdee fi rakkoo Siyaasaa dhalate furuuf mootummaan dhawaataan furmaata laata waan ta’eef Ummanni gaaffii qabu hookkaraan ala karaa nagahaatiin gaafachuu qabaa dha kan hoogantootni Ihaadig xibaaraa turanii fi jiran.
“Mala Sardiidoon beektu Qamaleenis beekti” Wayyaanee fi jaleen ishee yeroo galaanni qabsoo guutee irra garagale duwwaadha kan rakkoo ummataa arguun hiikkoof yaaddoftu; Isa kana ummanni Oromoo tolchee beeka. Rakkinoota dhalatan kana hiikaa jirraan oggaa tarrisan, Rakkoo kira sassaabdummaa fi Rakkoo Bulchiinsa gaarii haarawoomsaan balleesinee dha kan isaan jedhan, Itti aansuun kan isaan akka rakkootti illaaluun furmaata isaati jedhan, Hidhamtoota Siyaasaa hiikuu, Dirree Dimokraasii bal’isuu fi Miidiyaalee Bilisa taasisuu dha, kan isaan amma akka furmaataaatti lafa kaayachuun ummattoota biyyattii addatti ammoo ummata Oromoo ittiin sobaa jiran. Kun cufti isaatuu tooftaa Filannoo dhufu kan bara 2020f of qopheessuuf jecha ittiin ummata hawwachuuf xibaaraa jiraniidha malee ummattoota biyyattiitiif yaadanii miti.
Dhuguma Wayyaaneen Dimokiraasii waaraa biyyattii keessatti sabachiisuuf yoo dhimmamte, hidhamtoota Siyaasaa gadi dhiisne jechuun tokkoo lamaan ummata afoo qabdee hawwannaa Ummataa ittiin argachuu duwwaa osoo hin taane Hidhamtoota siyaasaa miseensota ABO kanneen Bara Chaartaraa irraa eegaltee hanga hadhaatti Oromummaa isaaniittin yakkuun du’aa fi jiraa isaanii dhabamsiifte cufa gadi baasuu qabdi!Kana hanga hin taaneetti gochaan Wayyanee fi lukkelee ishee kun kan Umrii bittaa isanii dheerefachuu akka ta’e ummanni Oromoo dagachuu hin qabu. Hidhamtoota Oromoo muraasa amma gadi dhiisan kanneenis kan godhaa jiraniif, jaalatanii osoo hin taane dirqamaniiti. Qabsoo Oromoottuu galaana ta’ee isaan fudhate, Galaana Qabsoo Oromoo fudhate kanaa jalaa bahuufi kan Hoomacha Bishaanii qabataa jiraniif.
Qabsoo Ummanni Oromoo osoo wal irraa hin kutin keessaa fi alaan taasisaa turee fi jiruun hadhaan tana hidhamtootni Oromoo hagoon gadi dhiifamaniiru; kanaaf hedduu gammanna gammachuun keenya daangaa hin qabu. Kanneen Oromummaa keessaniin yakkamtanii hidhamuun dararaa fi hararaafama wayyaaneen miidhamaa turtan cufti keessanuu baga dukana diinaa keessaa baatanii qabsoo ummata keessaniitti makamtan, maatii fi firoottan isaaniis baga gammaddan baga walumaanuu gammanne; Kun jalqabbii bu’aa QBO ti malee xumuraa miti. Qabsoon Oromoo Hanga Bilisummaa fi Walabummaatti itti fufa.
Wayyaanees ta’ee OPDOn QBO ummanni Oromoo Jaarraa tokkoo oliif itti dadhabee, lafee itti cabee, dhiiga itti dhangalaasee, gootota ilmaan isaa qarayyoo sabaa itti dhabe takkuu of duuba deebisanii hin beekan, hin deebisanis. Qabsoo goonni tokko irratti kufe kan biraattu itti lufa/dabra malee Qabsoon Bilisummaa sabaa fi Walabummaa biyyaatiif taasifamu hanga itti gallii isaa milkii fi injifannoo ta’utti hin dhaabatu; Seenaa biyyoota gabroomfataa jalaa Bilisoomanii keessattis kan tolaan Bilisummaa argate hin dhageenye hin argines.
“Alagaa Ilkaan Adii Halangaan isaa sadii” QBO Ummanni Oromoo Bal’aan, Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi qabsaawonni Oromoo Qe’ee fi qabeenya isaanii itti lagachuun itichanii utubanii hadhaan gahuun rarraga Bilisummaa irra geessan kuffisuuf jecha Shirri OPDOn goftolii isaanii Wayyaanee waliin ta’uun shiraa jirtu yoomiyyuu hin milkaa’uufi. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Ummata Oromoo OPDOn afaaniin Oromoo Damma Muxachiisaa ifattis ta’ee harka Wayaa jalaatiin SUMMII ITIYOOPHIYUMMAA facaasuun qabsoo Oromoo laamshesutti jirti.
“Diinnii Laalattu malee hin laallattu” Tibba kanas Qabsoo ummanni Oromoo dinne didaan tokummaan ka’ee guutummaa golee Oromiyaa keessatti lagannaa gabaa taasisuu, daandiiwwaan cufuu, qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu fi dhaadannolee gabroomfataa ballaleffatan dhageesisuun mirga abbaa biyummaa isaaniitiif falmataa jiraniin, Dh.D.U.On gooftolii isii Wayyaanee waliin dhiphuu keessa senuun karaa Foddaa TV isaaniitiin gaaffiin gaafatammu sirrii ta’us, akkataan itti deemaa jirtan sirrii miti jechuun Ummata Oromootti danqaa fi danqaraa Qabsoo ta’aaru. Ololli afan fajjii diinaa fi lukkelee diinaa Galma gahiinsa Kaayyoo keennyaa nu hin hanqisu.
Waan ta’eef Ummanni Oromoo bal’aan biyya keessaa falmaa hadhaawaa gaggessaa jirtu, Qeerroon Bilisummaa Oromoo Qeerransi Qeensa qaraa diinaaf osoo hin jilbiifatin diinaan kokkee wal qabdee jirtu, sabboontonni ilmaan Oromoo bobaa diinaa jala teessanii QBO bifa barbaachisu hundaan finiinsaa jirtan, Ummanni Oromoo keessaa fi alaan falmaa mirga abbaa biyyummaa taasisaa jirtan, Walumaa galatti saboota cunqurfamoo biyyattii keessaa dabalatee kanneen Bilisummaa fi Walabummatti amantan nagaha jaalattootni cufti keessanuu xurumbaa kijibaa mootummaan goolessituun Wayyaanee fi Lukkeleen ishee karaa Foddaa TV isaaniitiin lallabduuf gurra keessan ergisuun gonkumaa hin barbaachisu. Kanaafi kan “Dhuufuu Harreef Funyaan Hin Qabatan” jedheefis.
Walumaa galatti gaaffii bu’uuraa fi Hundee ummanni Oromoo gaafatu gaaffii Bilisummaa, gaaffii Walabummaa, gaaffii Birmadummaa fi Gaaffiin mirga abbaa Biyummaa Oromoo akka deebi’u gochuuf fallii fi malli jiru tokichii fi inni maayii Sochii Warraaqsa Biyyoolessa FXG Oromiyaa cinaa dhaabbachuun Qabsoo finiinsuu dha.
Tokkummaa Keenyaan ni moona!
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts – 14 February 2018